Amadoda aneenwele ezintle - iimpazamo eziqhelekileyo kunye nezisombululo | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba ugwebe ukhetho lokuthwala intloko, into esebenzayo kakuhle kumadoda amaninzi aneenwele ezintle, Ukuphepha ezi mpazamo kuya kukunceda ufumane okuninzi koku unayo.
Ezi zilandelayo zine imikhwa esebenza ngokuchasene neenwele ezintle kunye nento onokuyenza endaweni yoko ukubonisa iinwele ezinesitayile kunye nokuzala:
1 Ukuhlamba iinwele zakho rhoqo
2 Zomise iinwele kuphela ngetawuli
3 Sebenzisa iimveliso ezinzima
4 Ukufumana iinwele ezingalunganga
Ukuhlamba iinwele zakho rhoqo
Ukuqaphela ukuba iinwele zabo ziqala ukuncipha, amadoda amaninzi ayayidibanisa nokuhlamba iinwele rhoqo. Kodwa ukungazihlambi iinwele zakho xa kukho imfuneko kuyenza mbi nangakumbi ingxaki, kusenza ukuba iinwele zibonakale zicocekile kwaye kubangele ukuba isikhumba entloko singabi sempilweni. Ukuba uneenwele ezintle, cinga ngokuyihlamba rhoqo ukuyigcina yomelele kwaye uthintele iingxaki ezinje nge-sebum kunye ne-dandruff, enokukhawulezisa ukulahleka kweenwele.
Zomise iinwele kuphela ngetawuli
Ukuhambisa isomisi kukuchitha esinye sezixhobo ezifanelekileyo ukunika ivolumu yeenwele ngendlela yendalo. Emva kokuhlamba iinwele zakho, yome kancinci kwaye, ngelixa isemanzi, faka umoya oshushu. Khumbula ukuhambisa imicu ukuya phezulu ukuze bafumane owona mthamo ubuninzi.
Sebenzisa iimveliso ezinzima
Iimveliso ezithile zeenwele, zombini imeko kunye nokuseta, zongeza ubunzima kwizinwele, zizenze zibonakale zicocekile. Kuphephe ukusebenzisa iimveliso ezingamanzi kakhulu, bukhrim okanye ioyile. Endaweni yoko, khangela iimveliso ezibandakanya igama elithi volumizer okanye pre-blow dryer. Xa uthambisa iinwele zakho, cinga owomileyo, njengoko kunjalo nge-wax ezigutyiweyo kunye nazo zonke iimveliso zokugqiba matte ngokubanzi. Eyaziwa kakhulu kwaye icetyiswayo yi-Schwarzkopf's Dust It:
Ukufumana iinwele ezingalunganga
Ukucheba iinwele kubalulekile xa kufikwa ekufihleni iinwele ezintle. Njengesiqhelo, ukubheja okukhuselekileyo kukunganxibi nokuba mfutshane kakhulu okanye kukude kakhulu, kunye nenxalenye ephezulu ixesha elide kunamacala kunye nape. Ukuqaqambisa okanye ukudaya iinwele zakho ukukhanya komthunzi kunokunceda ukufihla ukunqongophala koxinano.
Ugqirha u-Theo James ('divergent') unokusebenza njengokhuthazo. Njengoko ubona, iinwele zakhe zifutshane emacaleni, ngelixa icala eliphezulu lide, kodwa alikho lide kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimpazamo ezine eziqhelekileyo ezenziwe ngamadoda aneenwele ezintle (kunye nendlela yokuzilungisa)
Amadoda ahamba ngenyawo avuselela ingqokelela yasentwasahlobo / yehlobo 2018